HyperX Pulsefire ngwa ngwa, anyị nyochaa òké egwuregwu a | Akụkọ akụrụngwa
HyperX Pulsefire ngwa ngwa, anyị na-enyocha oke egwu egwu a
Miguel Hernandez | 01/04/2021 10:00 | Emelitere ka 26/03/2021 23:35 | General, Nyocha
Peripherals na-adị oke mkpa dịka PC n’onwe ya ma a bịa n’inwe egwuregwu ogologo oge nke egwuregwu vidio, nke a bụ kpọmkwem ihe na-eme HyperX, akara a ghọtara maka igbo mkpa nke ndị egwuregwu kachasị na nke a. Oge a anyị chọkwara iwetara gị ule kachasị ọhụrụ nke ngwaahịa metụtara egwuregwu.
Anyị na-eleba anya na HyperX Pulsefire Haste ọhụrụ, igwe na-egwu egwu egwuregwu nke ga-enye gị ohere ị nweta ọtụtụ nsonaazụ gị. Typedị oke a aghọọla ezigbo ejiji n'etiti ndị ọkachamara, ọ bụ eziokwu na ha na-enye nsonaazụ ọma?
1 Nzube na ihe
Nzube na ihe
HyperX na-arụpụta ụdị ngwa a na-aga n'ihu, na nke a, anyị nwere usoro ọdịnala mara mma, ọ bụ ezie na eziokwu ahụ nwere ọtụtụ perforations na-egbu iji mee ka ịdị arọ ya dị ka o kwere mee.N'ihi ya, anyị nwere ibu na-enweghị eriri nke gram 59 na eriri nke 80 grams na mkpokọta. Na a kpam kpam gburugburu na-ahụkarị imewe, o nwere a button n'elu imeghari ọsọ nke ije, abụọ omenala bọtịnụ, dakọtara wheel na abụọ buttons na isi mkpịsị aka ebe. Ste nwere ike ịsị:
Naịlọn HyperFlex USB USB
TTC Golden Dustproof Microtec
Agbakwunye agbatị agbakwunye gụnyere
Total mkpọchi: isii
Emere ya site na plastic, jiri ya too 124.2 x 32.2 x 66.8 mm na ngụkọta. Ekwesiri ighota na olee otu osi adi na ozo, anyi nwere RGB ikanam nke etinyere na nke a na wiil, na bụ na ịbụ otú ìhè, ụdị nkọwa a na-ejedebeghị na kacha na ihu ọma nke ukwuu nkasi obi nke ngwaọrụ.
Banyere ihe mmetụta, anyị nwere na ya a Pixart PAW3335 nwere mkpebi nke ruru 16.000 DPI, na anyị nwere ike hazi site na iji bọtịnụ si 400/800/1600 ruo 3200 DPI. Nke a na-enye anyị ngụkọta ọsọ nke 450ips na oke ọsọ nke 40G. Nke a na-esonyere ya micro key micro TTC Golden nke na-akwado ihe dị ka nde 60 clicks.
Banyere ebe nchekwa echekwara, ọ nwere naanị profaịlụ, enwere ike ịhazi site na ngwa HyperX ị nwere ike ibudata na EGO. Ngagharị ntuli aka bụ 1.000 Hz site na eriri USB HyperFlex na teknụzụ USB 2.0 nke ọdịnala.
Na nke a, ọ na-enye anyị a pụtara minimalist òké, nke na-etu ọnụ nke lightness na eziokwu bụ kpomkwem ka nke ahụ. Ọ na-abịa nke ọma ma na-ezute njirimara teknụzụ e kwere ná nkwa, kpomkwem ka ọ gbanwee maka uru ọ bara maka ego. Ekwesiri ighota na anyi choputara onu ahia nke 59,99 euro na uzo ahia di iche iche dika Amazon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » HyperX Pulsefire ngwa ngwa, anyị na-enyocha oke egwu egwu a
Xplora X5 Kpoo smartwatch maka umuaka
Crosscall Core-T4 mbadamba ihe nile [Analysis]